Ndị Juu nupụrụ isi gawa Ijipt (1-7)
Jehova gwara Jeremaya okwu n’Ijipt (8-13)
43 Jeremayagwara mmadụ niile ahụ ihe Jehova bụ́ Chineke ha gwara ya ka ọ gwa ha. O nweghị nke ọ na-agwaghị ha. Mgbe ọ gwachara ha ihe Jehova bụ́ Chineke ha kwuru, 2 Azaraya nwa Hoshaya, Johenan+ nwa Kariya, na ụmụ nwoke niile onwe ha na-ebu isi sịrị Jeremaya: “Ọ bụ ụgha ka ị na-agha. Jehova bụ́ Chineke anyị agwaghị gị ka ị gwa anyị ka anyị ghara ịga biri n’Ijipt. 3 Kama, ọ bụ Barọk+ nwa Neraya na-aranye gị ikwu ihe ị na-ekwu n’ihi na ọ chọrọ ka ndị Kaldia kpara anyị aka, ka ha wee gbuo anyị ma ọ bụkwanụ dọrọ anyị n’agha laa Babịlọn.”+ 4 Johenan nwa Kariya na ndị ọchịagha niile nakwa ndị ahụ niile erubereghị Jehova isi. Ha jụrụ ịnọrọ na Juda. 5 Kama ịnọrọ na Juda, Johenan nwa Kariya na ndị ọchịagha niile ahụ kpọọrọ ndị Juda niile fọdụrụ gbapụ. Ndị a ha kpọọrọ bụ ndị si ná mba niile a chụsasịrị ha lọta ka ha biri na Juda.+ 6 Ha kpọọrọ ụmụ nwoke, ụmụ nwaanyị, ụmụntakịrị, ụmụ nwaanyị eze mụrụ, nakwa onye* ọ bụla Nebuzaradan+ bụ́ onyeisi ndị nche hapụrụ ka ya na Gedalaya+ nwa Ahaịkam+ nwa Shefan+ nọrọ. Ha kpọkwaara ma Jeremaya onye amụma ma Barọk nwa Neraya. 7 Ha kpọ ha bata Ijipt, si otú a nupụrụ Jehova isi. Ha gagidere ruo Tapanhis.+ 8 Ka ha ruru Tapanhis, Jehova gwara Jeremaya, sị: 9 “Buru nkume ndị buru ibu, nọrọ n’ihu ndị Juu zoo ha n’ụrọ dị n’ebe e doro brik, n’ebe e si abanye n’ụlọ Fero dị na Tapanhis. 10 I zochaa ya, gwazie ha, sị, ‘Jehova nke ụsụụ ndị agha, bụ́ Chineke Izrel, kwuru, sị: “M ga-akpọ Nebukadneza* eze Babịlọn, bụ́ ohu m.+ M ga-adọsa ocheeze ya n’elu nkume ndị a m zoro. Ọ ga-amakwa ụlọikwuu ya n’elu ha.+ 11 Ọ ga-abịakwa lụso ndị Ijipt agha.+ Ọrịa ga-egbu ụfọdụ n’ime unu. A ga-adọrọ ụfọdụ n’ime unu n’agha. A ga-ejikwa mma agha gbuo ụfọdụ n’ime unu.+ 12 M ga-amụnye ụlọ dị iche iche a na-anọ efe chi ndị Ijipt ọkụ.+ Eze ahụ ga-agbakwa ụlọ ndị ahụ ọkụ ma buru chi ndị ahụ laa. Otú ahụ ọ na-adịrị onye ọzụzụ atụrụ mfe iyiri uwe mwụda ya, ka ọ ga-adịrị ya mfe imeri ndị Ijipt niile. Ọ ga-esikwa n’Ijipt laa n’udo.* 13 Ọ ga-akụrisị ogidi niile dị na Bet-shimesh,* nke dị n’Ijipt. Ọ ga-agbakwa ụlọ dị iche iche a na-anọ efe chi ndị Ijipt ọkụ.”’”
^ Ma ọ bụ “Ọkọ agaghị akọ ya ya esi n’Ijipt laa.”
^ Ma ọ bụ “Ụlọ Chi Anyanwụ,” ya bụ, Heliopolis.